Kaneecada ilbiriqsi ee kaniiniyada. | Laga soo bilaabo Linux
Kaneecada ilbiriqsi ee kaniiniyada.
Sida muuqata ragga Canonical waxay rabaan inay daboolaan suuq ka badan inta ay guud ahaan rajeynayaan.
Hadda waxaan aragnaa inuu doonayo inuu tuuro sare oo uu kiniiniyada ku jaro warka sheegaya inuu rakibe soo baxay "Hal-guji" si loogu rakibo Ubuntu Nexus 7 ee Google. In kastoo aysan u muuqan fikrad xun ama dhaqaaq xun aniga, waxaan isweydiinayaa xaqiiqda ah in Canonical uu doonayo inuu waxbadan daboolo.
Aragti ahaan rakibeyaha waxaa loo adeegsadaa qaab fudud waxa kaliya ee aad u baahan tahayna waa in bootloader-ka la furo si howshan loo sameeyo. Kahor intaadan i weydiinin, ma baareynin sida loo sameeyo mana kuu sheegi karo sababta, si aan runta u sheego, anigu ma xiiseynayo inaan Ubuntu ku rakibo kiniin; Canonical wuxuu xusayaa in tani ay tahay uun marxalad imtixaan iyo in nidaamku wali waxyaabo badani ka maqan yihiin, sidaa darteed loogu talagalay dadka raba inay tijaabiyaan oo ku shukaansadaan xoogaa gabdho ah in muddo ah oo ay u sheegaan "Fiiri, waxaan ku haystaa Linux kumbuyuutarkeyga", laakiin isticmaalka maalin kasta, ama xitaa shaqeynaya, waxaan ka shakisanahay inay shaqeyn doonto.
Markale taabashada bayaanka ee ah in la gooyo wax ka badan inta ay goyn karto, aniga ahaan Canonical wuxuu si aad ah u kala firdhinayaa dadaalka halkii uu diiradda saari lahaa qodobbada muhiimka ah iyo fulinta mashaariic dhameystiran oo dheeri ah, waxaan leeyahay, Ubuntu nidaam ahaan dhibaatooyinkeeda ayay leedahay, iyagu waxay leeyihiin mashruuca leh Android waxayna leeyihiin Midnimo, oo waliba u baahan xoog badan oo lagu daabaco.
Marka la soo koobo, warku ma ahan mid aad u dheer ama qoto dheer, mana doonayo inaan ka hadlo waxa ay kaniisaddu sameyneyso ama aysan sameyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Kaneecada ilbiriqsi ee kaniiniyada.
Hagaag, ubuntu waxay umuuqataa mid quruxsan kaniini, inkasta oo aynaan sugi doonin nooca ugu dambeeya si aan u siino cabir buuxa
Kuwa ka soo jeeda Canonical ... waxay u muuqdaan inaan isticmaalo Ubuntu laakiin ...
Waxaan u maleynayaa in Canonical ay tahay inay wax badan ka qabato sidii loo xoojin lahaa nidaamkeeda hawlgalka isla markaana looga dhigi lahaa mid xasilloon laanta desktop-ka.
Micno malahan in la keliyeeyo aagag badan haddii aadan bixinayn 100% midkoodna .. kiniinno, ubuntu tv, mobiles..pufff.
Ku jawaab Kannon
Ubuntu Tablet Remix ha soo baxo.
Hahahahaha .. Waan xanaaqay hahahaha Markaa ma Tabluntu? Ha ha ha ha ha ha ha
Su'aal, haddii Ubuntu uu xor yahay oo xor yahay, meeday faa'iidada Canonical ee waxaas oo dhan? Hagaag, uma maleynayo inay shaqo badan u qabtaan jacaylka Linux sida ay uga dhacdo meelaha kale. Runtu waxay tahay anigu garan maayo halka ay doonayaan inay aadaan, ama waxa laga fikirayo.
Su’aal xiiso leh. Dhamaan noocyada meheradaha ganacsi kuma saleysna iibinta wax soo saarkooda sidan oo kale, fiiri Google, waxba kaaama iibiyaan, kuma kaa qaadaan lacag adeegsiga mashiinka raadinta, mashiinka raadinta (iyo dhammaan adeegyadiisa bilaashka ah ee la xiriira) a peculiarity: waxaa loo sameeyay inay taageeraan barnaamijka xayeysiinta ee google.
Canonical ma kasbado waxna kama kasban doono iibinta Ubuntu, maxaa yeelay si aan u iibsado nidaam qalliin, waxaan la joogaa Mac ama Windows, waxay ku kasbadaan xarunta softiweerka, iibinta taageerada, la shaqeynta shirkadaha wax soo saara ... waxay si fudud u kasban karaan lacag iyagoo ku jira barxad kale oo u oggolaanaysa iyaga inay daboolaan meelo badan. Waa wax aad u adag in la sharaxo.
Nano qaali ah meesha waad garaacday. Qaabka ganacsiga ee loo isticmaalo adduunka * NIX wuu ka duwan yahay kan kuwa kale adeegsadaan tanina waxay leedahay faa'iidooyin badan.
Shirkadaha badankood ee taageera qaybinta Linux waxay leeyihiin dakhligooda ka soo gala taageerada, way yar yihiin kuwa sidoo kale iibiya barnaamij kasta oo softiweer ah.
Marka laga hadlayo Ubuntu, marka lagu daro dakhliga ka soo gala taageerada, waxay nuqul ka tahay qaabka ganacsi ee Apple (gaar ahaan iibinta muusikada) iyo guddiyada ay ka qaadi doonto iibsashada Amazon iyada oo loo marayo OS.
Iyo banaanka Linux taas oo aad u badan:
Qaabka 1aad: Waxaan ku iibinayaa softiweerka aad qaaliga u ah, laakiin waxaan ku siinayaa taageerada qiimo aad u jaban ama bilaash ah. (sida midka Microsoft uu raaco, tusaale ahaan)
Qaabka 2aad: Waxaan kaa iibinayaa qandaraas taageero ah oo loogu talagalay X tirada sannadaha, laakiin softiweerku gabi ahaanba waa bilaash ama qiimo macquul ah oo macquul ah. (Waa tan ugu caansan - taas macnaheedu maaha shirkadda kaliya ee bilaashka ah ee shirkadaha software-ka iyo xirfadlayaal madax-bannaan)
Shakhsiyan waxaan doorbidayaa in loo adeegsado Kiniiniyada Kubuntu, KDE plasma Active 3 waxay u shaqeysaa si ka wanaagsan sidii aan filayay, runta ayaa ah, waxaan ku guuleystey inaan ku rakibo Kubuntu Kiniiniyada kiniiniga Woo ee kuwa lagu iibiyo Carrefour, sidoo kale halkan Colombia, ma haysto ' Waan ogahay inay ku iibin doonaan dalal badan, laakiin aan kuu sheego inay tahay wax aan fiicnayn, uma xiisay KDE oo tani waa horumar weyn oo aad u wanaagsan, waa sababta aan u idhaahdo waxaan doorbidayaa KDE kiniiniyada, iyo xitaa si lama filaan ah Gnome Shell halkii midnimada.
Ivan Barra Martinez sawirka meesha dijo
Anigu shaqsiyan waan ku rakibayaa Tabluntu tabkeyga galaxy. Waxaan in mudo ah isticmaalaayay CyanogenMod 10, laakiin nasiib daro android si buuxda uma qanciso dhamaan baahiyaheyga kujira mobilka. Tabluntu waxay ii noqon laheyd ikhtiyaar aad ufiican aniga, marka laga fiiriyo aragti kasta, waxay leedahay malaayiin habeyn la heli karo, oo na siineysa inaan doorano kuwa aan dooneyno. Waan ka xumahay inaan arko iyadoo Android kasta oo soo baxa, ay sii wadaan inay isticmaalaan isla jirkii hore ee java, kaas oo waxa ay qabataa oo dhan ay yihiin horumarka ganacsiga iyo ballaarinta nidaamka laftiisa, xitaa haddii uu si adag u muuqdo.
Waxaan rajeynayaa in Canonical ay sameyso oo ay sifiican u sameyso, in kasta oo wax waliba jiraan, hadana waxaan ku kalsoonahay iyaga, maxaa yeelay iyagaa ii soo dhoweeyey Linux (waa kan maanta i quudiya).
Jawaab Ivan Barra Martinez
Noocan ay hayaan ayaa loogu talagalay horumarinta iyo tijaabinta, sidaa darteed laguma talin doono.
Hadda, oo ku saabsan Java, +100000000000000000000000, waxaan kugu taageersanahay maadaama aadan wax fikrad ah qabin, laakiin taasi waa waxa ay iibiso iyo waxa dadku horumariyaan (Ma aqaano sababta ay luqado fiican uga jiraan halkaas).
Si aan aad ugu dheeraan. Ma waxaad dooneysaa Linux kiniinkaaga? Waxay isticmaashaa Plasma Active, oo ku saleysan KDE iyo Linux, oo horeyba u xasilloonaa aadna u horumarsan.
Wow, waxay umuuqataa mid wanaagsan, wali waxaan jeclaanlahaa inaan aqriyo cashar cashar fiican laga sameeyay halkaas, waxaan ka baqayaa inaan helo leben hadaan qalad sameeyo.
Waan isku dayayaa, haddii ay shaqayso, waan faallaynayaa.
Waxaan ahay qof xiiseynaya, maxay yihiin luqadahaas aad sheegayso ee ka wanaagsan Java? Sababtoo ah runtu waa inaan sidoo kale necbahay oo aan quusto.Ma ihi barnaamij-yaqaan, mana aqaano wax ku saabsan waxyaabaha noocaas ah.
Hadda oo aan ka hadlayo deegaanno loogu talagalay kiniiniyada waxaan kaloo akhriyay in 'Enlightenment' uu sidoo kale ikhtiyaar u leeyahay kaniiniyada oo aan runtii ka helay markii aan tijaabinayay dhowr bilood ka hor inkasta oo aanan isku dayin haddana waxaan u arkay inay xoogaa faa'iido ii leedahay runti waxaan xusuustaa akhrinta nooca Nokia Waxaan ku darayaa mid ka mid ah terminaalkeeda, yaa tijaabiyey? Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la ogaado aragtida qof ee ku saabsan, inkasta oo fiidiyowyada aan ku arkay ay si aad u wanaagsan u shaqeeyaan.
Kahor intaadan i furin, waxaan joogaa xafiis iyo PC amaah ah, waana sababta aanan ugu tuurin faallooyinka Linux.
Luqadaha ayaa kafiican Java? Qaar badan. Ugu horreyntii, faham, in Java uusan ahayn luuqad la soo ururiyey sida dad badani aaminsan yihiin, MAYA, maya. Java waa luuqad si cad loo tarjumay oo isku dubarideysa turjubaanka iyadoo la adeegsanayo mashiinno farsamo oo culus, taas oo ka dhigeysa codsi kasta oo weyn oo Java ah inuu yahay cunno cunno cunno ah, oo aan ku xusin in qaabeyntiisa ay tahay wax laga yaqyaqsoodo ah.
Hadda, haddii waxa aad raadineyso ay tahay xawaare lagu fulinayo, waxaan shaki ka qabaa inaad heli doonto wax ka fiican C ama C ++, illaa aad ka mid tahay raggaas timaha badan ee ku dhiirranaya inay isku soo dubarido. Haddii aad rabto inaad ujeeddo badan u yeelato barnaamijyada websaydhka waxaad leedahay Python iyo Ruby oo ay weheliyaan qaab-dhismeedkooda kala ah Django iyo Ruby on Rails (iyo qaabab badan oo xiise badan leh), ama, tan ugu xun, PHP. Dhanka desktop waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa Python dhibaato la'aan maadaama ay leedahay wax isku xidhan waxkasta iyo ilaa iyo intaadan u baahnayn waxqabad aan caadi ahayn, waad isticmaali kartaa, runti, waxaan dhihi lahaa waxay la mid noqon kartaa Java maaddaama ay jiraan mashaariic uruurinaya Python ilaa ByteCode siyaabo aad waxtar u leh waxayna u rogayaan Python rasaas (Cpython waxaan filayaa inay ka mid tahay).
Waa adduun weyn, waxaan kugula talinayaa inaad dib u eegto oo aad wax barto.
Waan kugu raacsanahay, fikirkaaga mooyee kiiska ugu xun PHP, hadaad aragto PHP waxaa jira farsamooyin ka dhigaya barnaamijyada dhexdhexaad, waxaan kuu sheegi karaa inaad ka mid tahay luqadaha ugu adeegsiga badan adeegsiga waxay siinaysaa elk, runtu waxay tahay PHP waa luqad aad ufiican inkasta oo habab iyo farsamooyin badan ay masiibooyin yihiin
Ubuntu ee ku-biirinta kiniiniyada ayaa lagu dhawaaqay tan iyo markii la soo bandhigay Midnimada, xaalad kastoo jirta, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la helo hal ikhtiyaar oo dheeraad ah ...
Ma jecli inaan dhaho tan laakiin: "Waan kuu sheegay sidaas." In muddo ah hadda, qaabka ganacsiga Cannonical wuxuu tilmaamayaa mid aad ugu eg kan ay adeegsatay shirkadda tufaaxa (eniendase apple). Sidaan horeyba u soo sheegnay, wax soo saarka unty, xaqiiqda ah in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha google ay adeegsadaan nooc u gaar ah ubuntu, u ekaanshaha midnimada google plus, isku xirnaanta adroid, phonobuntu, TVuntu, tablebuntus, iwm, iwm, iwm. waxay ku dhammeeyaan cabirka wareegga. Microsoft waxay horeyba u dareemeysaa talaabooyinka asotea waxayna ka shaqeyneysaa inay sameyso wax la mid ah wintables-keeda iyo winphone-yada gebi ahaanba la xiri doono (sida Apple oo kale). Cajiib maya?
Nidaamyada deegaanka, iyo gaar ahaan aaladaha mobilada, waa nashaad suuq ah oo bilaabaya inuu qaabeeyo oo lagu go'aamiyo qaab "hubaal ah" dhadhan iyo caadooyin. Apple waxay leedahay awood aad u wanaagsan oo tan ku saabsan, Microsoft ma rabto in la tirtiro ama lagu xaddido deegaanno gaar ah (faham PC-ga) iyo ubuntu, oo gacanta ku haysa Google, ayaa ka shaqeynaya inaysan ka bixin ganacsiga.
KDE oo leh nooca kiniiniga ah iyo Gnome oo leh Shell-keeda ayaa calaamad u ah in aaladaha moobiilku ay noqon doonaan hormoodka ganacsiga IT-ga iyo kumbuyuutarrada oo loo weeciyay xilli labaad (laakiin waxay qayb muhiim ah ka noqon doonaan nidaamka deegaanka).
Hadda, Mozilla iyo HP waxay ka shaqeynayaan WebOS-kooda runtiina Mozilla-da waxaa lagu dhejin karaa Ubuntu (wali waxay ku jirtaa noocyada qiimeynta), sidaa darteed waxaan haynaa:
Waqtigan xaadirka ah iyo muddada dhexe, dadaalada ay wadaan ciyaartooyda waaweyn ee waxsoosaarka waxay xooga saarayaan aaladaha mobilada, sidaa darteed si dhaqso ah ama goor dambe aaladaha aaladahaan waa inay diirada saaraan isku xirnaan "la mid ah" si barashada waxbarashadu u celcelis ahaan isticmaaleyaashu waa kuwa ugu yar oo leh ugu badnaan suurtagalnimada suuqa.
Sababtaas awgood waxaa jira waxyaabo badan oo iskaga mid ah (isha isuma la mid aha) inta u dhexeysa tusaale ahaan KDE Tablet, Gnome SHELL iyo Android iyo haddii aan wax badan sii odoroso, isweydaarsiyadani aad ayey isugu egyihiin, ma aha oo keliya iyaga dhexdooda laakiin sidoo kale kombuyuutarka oo hadday rabaan tusaale Tusaale ahaan waa Android ee PC-ga iyo "u ekaanshaha" Gnome Shell iyo KDE Tablet runtiina uma malaynayo inay tahay wax kadis ah (sidaan horay u soo sheegay, ma aaminsani wax isku soo beegay iyo in ka badan) meheraddan).
Waan ogahay in wixii aan ka faalooday ay ii calaamadin doonaan inaan ahay bidco iyo aflagaado, iyo sida Giordano Bruno, waxaa la i weydiin doonaa inaan igu xukumo dusha. Waan ogahay in dad badani aysan raali ka noqon doonin hadaladayda, laakiin runta, ka hor intaanan dabka isku tuurin, waxyar baadhitaan waadna arki doontaa in kastoo ay umuuqato waalli iyo mala-awaal, waxa aan faallay runti sidaas maahan.
Been ma ahan waxaad sheegto, waxa kaliya ee aanan ku raacsaneyn ayaa ah in pc-ga dib loo dhigi doono. Waxyaabaha ayaa ah, kombiyuutarada ayaa had iyo jeer bixiya wax aan telefoonada ama kiniiniyada waligood bixin doonin: habeyn iyo dib u celin.
Waan kordhin karaa RAM-ka kumbuyuutarkeyga, laakiin ma kordhin karo qalabkeyga kale. Kombiyuutarada kumbiyuutarradu ma laha barnaamij gabow ah, laga yaabee inay ka kooban yihiin, laakiin kuwani waa kuwo is-beddeli kara oo la beddeli karo (overclock, iwm.), PC-ga waligiis ma joogsan doono inuu noqdo boqoradda, in kasta oo "dhaqdhaqaaqa" uu yahay ra'iisul, haddana mar walba waxaa jiri doona daqiiqado socodka hareeraha halkaasna waa halka PC uu kun jeer ka fiican yahay.
Marka loo eego nano-kaaga, "baabi'inta" kombiyuutarada ayaa la sii saadaaliyay muddo dheer; Waxay dhacday markii uu laptop-ka soo kordhayay dhawr sano ka hor hadana mar labaad ayey dhacdaa hadda iyadoo ay soo kordhayaan aaladaha mobilada Fikradayda, tani ma dhici doonto maxaa yeelay qodobka ugu muhiimsan ee ka hortagayaa waa miisaanka kumbuyuutarrada, oo aan ka jirin qalabka intiisa kale ee hadda la heli karo, sidoo kale uma maleynayo taas muuqaalka soo socda. Xaqiiqda dhabta ah ee lagu dari karo cajalado badan, kaararka sawirada iyo / ama tuner, xasuusta, iwm.
Haddii aan fiiro gaar ah u yeelano, "baabi'inta" aaladaha qaarkood ma aha sidaas, laakiin waa "horumar" iyada oo loo marayo "iskutallaab" noocyo kale ah; tusaale ahaan: PDAs waa la waayey iyadoo fursad loo siinayo taleefannada casriga ah (iskutallaab u dhexeysa PDA iyo taleefanka gacanta).
Xaaladaha hadda jira, iyo kuwa lasaadaalin karo muddada gaaban iyo kuwa dhexe, wada noolaanshaha ka dhexeeya dhammaan "noocyada" nidaamkan deegaanku wuu sii socon doonaa, inkasta oo halabuurkiisu is beddelayo, maaddaama qalab kastaa uu ka jawaabayo baahiyo gaar ah oo aan si buuxda loogu qanacsanayn guud ahaan. mid kale; eeg sida kiniiniyada iyo akhristayaasha ebook-ku u wada nool yihiin, in kasta oo aan kan hore ugu isticmaali karno hawsha ta dambe.
Sameynta Nostradamus xilliyadan ma fududa, oo xitaa way ka sii yaraanaysaa markay tahay bixinta shahaadooyinka dhimashada.
Oo iga raali ahaw biilka ...
Dhib malahan Charlie-Brown, runti aniga iskuma arko inaan ahay garyaqaan, faaliye ama sixirroole qaabkii Harry Potter iyo usha ujeeda mustaqbalka.
Anigoo ah lataliye IT ah, waxaan ubaahanahay inaan baaro oo aan falanqeeyo xaaladaha (yada) suurtogalka ah ee ka dhalan kara tan iyo saameyntan si gaar ah (si aan toos ahayn iyo mararka qaarkood toos) dhadhanka iyo shuruudaha adeegyo badan oo macaamiishayda qaarkood ay tahay inay tixgeliyaan . Tusaale ahaan, shabakadaha bulshada, marin u helida mobilada, xisaabinta daruuraha, xogta iyo wada shaqeynta arjiga, iwm. Awoodahani waa inay qayb ka noqdaan nooc ka mid ah xalalka ganacsiga ee raadinaya inay ka faa'iideystaan ​​"fads" ama "isbeddellada" sida ugubnimada iyo u qaadashada adeegsiga tikniyoolajiyadaha geeska ah. Tani, in kasta oo ay umuuqato wax lagu qosli karo, iibin iyo dhamaadka maalinta ganacsade waa waxa xiisaynaya.
Waad salaaman tihiin jorgemanjarrezlerma, muddo 9 sano ah (illaa goor dhaweydna runtii), shaqadaydu waxay aad ugu egtahay sidaad u sifeyneyso, marka waxaan u maleynayaa inaan sifiican u fahmay waxaad leedahay; Waxa dhacaya ayaa ah, feker ahaanteyda, isku xigxiga dhacdooyinka waxay noqon doonaan sidan soo socota: horumarka teknoolojiyada IT-ga, oo leh web 2.0, daruur uruurinta, iwm., Waxay keeneysaa muuqaalka aaladaha cusub (gaar ahaan aaladaha mobilada), oo noqda qayb ka mid ah nidaamka deegaanka, la tartamida kuwa hadda jira xagga saamiga suuqa, LAAKIIN, ka sarreeya dhammaantood, iyaga oo dhammaystiraya. Tani waxay noqoneysaa "isbeddello" iyo "moodyo" (oo ah muujinta bulshada laakiin sidoo kale natiijada suuq-geynta suuqa) ee xallinta ganacsiyada ugu dambeyntii la isugu geeyay, taas oo dalabka muddada-dhexe iyo / ama dhalinaysa horumarro cusub oo xagga tiknoolajiyada IT ah, iyo wixii la mid ah ...
Ujeeddadayda faalku waxay ahayd si sax ah inaan u xoojiyo iswaafajinta aaladaha (labadaba jira iyo kuwa cusubba) ee aan sinnaba u tilmaamaynin maqnaanshaha kombuyuutarrada, haddii aad u fahamtay inuu yahay weerar toos ah oo ku saabsan faalladaada, taasi may ahayn ujeedadaydu, sikastoo ay ahaataba, waxay noqon doontaa suuqa u xilsaaran diidmada iyo, nasiib daro, anigoon xaq u lahayn inaan ka jawaabo.
Ka waran Nano.
In kasta oo waxa aad ka tiraahdid PC-ga ay run yihiin (sidoo kale waxaan u maleynayaa inay isku mid yihiin) kaliya inay yeelan doonto doorka loogu yeero "Secondary" iyadoo macnaheedu yahay inay noqonayso xarunta nidaamka deegaanka iyo in taleefannada gacanta ay kuu oggolaanayaan inaad " qaado "adiga". Xaqiiqdii, falanqeeyayaasha qaar waxay tixgeliyaan in aaladaha mobilada qaarkood sida "kiniin" ay noqon doonaan qalab badan ama ereyo fudud, qayb ka mid ah PC-ga oo waxaan tusaale u soo qaatay Acer Iconia oo ah laptop-ka oo leh kormeeraha lakala bixi karo oo u shaqeeya sida kiniin ah.
Hubaal, waligeed la mid ma noqoneyso PC desktop-ka oo la gashan karo lagana siibi karo, laakiin haddii aad si dhow u fiirsato, qaybo badan oo ka mid ah ayaa "si ficil ahaan ah loo tuuri karaa" isla markaana leh nolol ka faa'iido yar sidii ay ahayd 10 sano ka hor.
Taasina waa sidaan ugu lumnay Ubuntu desktop-ka ... Wuxuuna safarkiisa ka bilaabay adduunka cajiibka ah ee shaashadaha taabashada (^ _ ^)
Isla marka la helo kiniiniyada Vivaldi ee leh Plasma Active 4, waan arki doonaa haddii aan mid iibsan karo.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la helo xoogaa kiniin ah oo fuck ah si loo tirtiro waxa loo yaqaan 'GNU / Linux' ee loo yaqaan 'ARM', oo doorbidaya Arch iyo haddii aysan ahayn waxa u muuqda in ay ka fiican yihiin waqtigaas - Ubuntu hubaal maahan, waa mid aad u culus oo u xajisan kiniin.
Waxaan u maleynayaa inay sax tahay in Canonical ay qaadadeeda ku dhigto meelo kala duwan si dadka aan aqoon software-ka bilaashka ah ay u bilaabaan inay la yaabaan waxa cadaabku yahay. Ubuntu waxay ku fiican tahay Linux cusub (aniga oo kale), shaqsiyan waxay albaabada u furtay aduunkan cajiibka ah ee softiweerka bilaashka ah. Waxaan si guul leh ugu rakibay Ubuntu ku dhowaad 40 kombuyuutar iyo su'aasha ugu horreysa ee dadka aan tuso Nidaamka Howlgalka ay i weydiiyaan waa: Oo maxaa Ubuntu aan si fiican loo aqoon?, Waxaana u maleynayaa in jawaabta fudud ay sabab u tahay suuqgeyn la'aan. Aragtidayda shakhsi ahaaneed Canonical waxaa ka go'an kala-duwanaanta nooc ka mid ah suuq-geynta, xaqiiqda ah inuu jiro TV-ga Ubuntu, kiniin Ubuntu leh, taleefanka gacanta, iwm ... waxay u oggolaaneysaa dad aad iyo aad u tiro badan inay bilaabaan inay su'aalo weydiiyaan jiritaanka Nidaamkan hawlgalka ee weyn oo xaaladaha ugu fiican iskuday, rakib oo ku dheji sidii aan sameeyay. Salaan.
Jawaab Gaspar Marquez
gebi ahaanba oggol 😀
Adduunyada kiniiniyada, waxaan dhihi lahaa, waa hadiyad ka timid Apple, halkaas oo horumariyayaashu ku ogaadeen inay ku dari karaan qiimo dhaqdhaqaaqooda astaamaha desktop-ka, taas oo sida aan u arkaayo khushuucda u muuqata fikrad weyn, halkaasoo marar badan aysan ahayn. Waxaan ubaahanahay awood aad u badan oo xisaabeed si ay u shaqeyso, qof walbana wuxuu doortaa qalabka uu u baahan yahay Ugu dambeyntiina, waxaan rabay inaan weydiiyo Ivan Ibarra sidee Plasma Active 3 oo kiniinkiisa ugu shaqeysa?
Xun, ma aanan helin casharro sharraxaya si faahfaahsan sida loo sameeyo, sidaas darteed waxaan ku sii wadaa CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.1).
Stallman wuu nool yahay, nool yahay oo midab buuxa leh
Ku keydi boqolaal MB kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya localepurge